fiaran-dalamby fandaharam-potoana casino ny kempsey
fiaran-dalamby fandaharam-potoana casino ny grafton
CGT mpisolovava Marka Clayton no voalazan'ilay Las Vegas Review Gazety milaza hoe: "saika ny rehetra karama bettors efa vita rehetra, ny amin'ny momba ny $599,000 amin'ny famerenana amin'ny laoniny." Izany dia tsy voalohany fa CGT, fantatra teo aloha ho Cantor Fanatanjahan-tena Boky, dia nanorim-ponenana amin'ny fanjakana dalàna mba hijanona eo amin'ny raharaham-barotra.
Ao anatin ' ny ponenana, CGT dia apetraho $25,000 ho escrow handoa filazana ny bettors izay afaka manaporofo izy ireo karama amin'ny CGT eo aogositra 2011 ary ny volana aogositra 2015 jackpot tanàna casino canada reddit. Michael Colbert, ny filoha lefitra teo aloha ny foko sy ny fanatanjahan-tena ny fitantanana ny loza, dia nosamborina tamin'ny 2012, ary taty aoriana dia niaiky fa manaiky an'arivony dolara amin'ny tsy ara-dalàna ny iraky ny filokana. Ny Nevada Lalao ny Vaomiera (FA) dia nanambara ny alakamisy teo fa efa nandany $1,5 tapitrisa ponenana amin'ny mikorontana sportsbook orinasa izay tratra ny tsy firaharahana ny rindrambaiko glitches fa karama bettors manodidina $700,000 jackpot tanàna casino kanada finday bonus. 31, 2016 fiaran-dalamby fandaharam-potoana casino ny newcastle. Hahazo ny farany filokana vaovao avy any Calvin Ayre fiaran-dalamby fandaharam-potoana casino ny sydney.
"Ity orinasa mila ny kolontsaina ny fiovana, dia tsy misy fisalasalana momba izany," Alamo hoy fiaran-dalamby fandaharam-potoana casino ny kempsey. Sportsbook mpamatsy CG Teknolojia (CGT) dia nitoetra tao amin'ny raharaham-barotra aorian'ny rehetra. NGCB nilaza ny sportsbook mpamatsy miscalculated manodidina ny 200 000 wagers nandritra izany fotoana izany, underpaying tanteraka ny $700,000 raha overpaying manodidina ny $100,000 fiaran-dalamby fandaharam-potoana casino ny grafton.
Sleutel draait niet meer ao slot